I-China Monkey ibonisa i-mesh, ifektri ye-mesh ye-mesh kunye nabaxhasi | Imitya ye-Gepair
Imiboniso yemonkey, i-mesh yomthungo
Inkqubo ye-mesh yeThungelwano yomatshini enezinto ezenziwe ngesandla ezenziwe ngentsimbi yentsimbi yentsimbi exhaswa ziziseko eziqinileyo zentsimbi ukwenza imilo yomgaqo.Ingqondo entsha yokuguqula ukujonga ukujonga iindwendwe ezingama-360 ngelixa kusenziwa indawo ekhuselekileyo.
Intambo yentsimbi engenazintsimbi inezinto ezininzi ezenza ukuba isebenze ngokugqibeleleyo, kwaye ilungele iinkawu ezinkulu, eziphakathi kunye nezincinci, efakwa kwisisele sokuvalelwa kwenkawu, imbonakalo yenkawu, isigcini senkawu, ukubiyelwa kweenkawu, isithintelo senkawu.
Umnatha weenkawu wenziwe ngentsimbi engaginyiswanga kwaye ulungiswa kwintambo yentsimbi engenasici. Le inethi eguqukayo enokuthi igoqwe kwaye ibenwe, kwaye inokwenza imilo yombhobho phantsi kwenkxaso yendandatho yensimbi ejikelezayo.
Umthungo wenkawu engenazintsu, iminatha yomhubhe ihlala isetyenziswa kuzo zonke iindidi zeenkawu, ngakumbi izilwanyana ezincinci ezinexabiso kunye neenkawu. Ububanzi bomyalezo we-tunnel mesh ngokubanzi bu malunga ne-75 cm, kwaye umgama phakathi kwamakhonkco esinyithi uhlala malunga ne-200 cm. Amagqabantshintshi emveliso aqhele ukusetyenziswa yiMonkey Tunnel Mesh yi-GP1651, GP2051 GP2476, njl., Kunye neenkcazo zemveliso ezisetyenziswa rhoqo yiTiger Tunnel Mesh yi-GP3251, GP3276, njl.
Edlulileyo: I-aluminium chain hook mesh
Okulandelayo: Z ebunjiwe yintsimbi yeflathi yentsimbi yefowuni eshinyeneyo yesandisi
Intambo engenasiciko yentsimbi ye-mesh eyongeziweyo (Inte ...
I-Anti-drop wire wire net
I-mesh ye-auraary yensimbi engenasici